Filazantsaran'i Maria - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Evanjelin'i Maria)
I Maria Magdalena - nataon'i Caravaggio - taona 1594-1596
Ny Filazantsaran'i Maria na Evanjelin'i Maria dia soratra gnostika izay angamba nosoratana tamin'ny taonjato faha-2. Resaka ifanaovan'i Maria sy ireo Apostoly no mibahan-toerana ao. Adihevitra ara-panahy iharan'ny firehana gnostika no hita ao. Ao amin'io evanjely io dia mampita tsy an-kinafinafina ny fampianarany amin'ireo mpianany ny Mpamonjy, izany hoe i Jesosy, avy eo tamin'ny fomba miafina tamin'i Maria Magdalena mandritra ny fahitana anaty. Nanaitra mafy an'i Petera izany satria tsy nino izy fa hampita fampianarana miafina amina vehivavy ny Mpamonjy.
I Maria izay lazaina ao amin'io soratra io dia heverin'ny mpandinika maro fa i Maria Magdalena (avy any Magdala) na dia tsy misy porofo mazava aza izany. Voasokajy ao amin'ireo evanjely apokrifa ny Evanjelin'i Maria. Tamin'ny taona 1896 no nahitana ny Filazantsaran'i Maria tany Ejipta nandritra ny nahitana ny tahirin-tsoratra tamin'ny fitenim-paritra kopta, dia ny fiteny kopta sahidka.
2 Ny votoatiny
Ny feteza-maty sy ny fiakaran'i Jesosy tany an-danitra ary ny amin'ny fanahin'olombelona araka ny fiheverana gnostika no lohahevi-dehiben'ilay lahatsoratra. Hita ao amin'io soratra io i Maria Magdalena izay mitarika ny Apostoly. Maneho ny tsy fitovian-kevitra nisy teo amin'ny fiandohan'ny fivavahana kristiana ity evanjely ity, dia ny fiheverana fa tsy mendrika ny hahazo fanambaràna manokana ny vehivavy. I Sofia, izay mpandray anjara ao amin'ny tantara sy fampianarana gnostika, dia mandray anjara koa ao amin'io filazantsara io.
Amin'ny fiandohan'ny fitantarana dia miresaka amin'ny mpianany ny Mpamonjy (i Jesosy izany) ka mamaly ny fanontanian'izy ireo ny amin'ny fomban'ny raha [matiera] sy ny fomban'ny fahotana. Any amin'ny faran'ny resaka dia lasa ny Mpamonjy ka nandao ny mpianatra izay sahiran-tsaina sady nanahy. Araka ny fitantarana dia niteny tamin'ny teny feno fankaherezana sy famporisihana i Maria. Avy eo nangataka azy i Petera mba hizara amin'izy ireo ny fampianarana manokana azony tamin'ny Mpamonjy:
« Hoy i Petera tamin'i Maria: "Ranabavy, fantatray fa tia anao mihoatra ny vehivavy hafa rehetra ny Mpamonjy. Ambarao aminay ny tenin'ny Mpamonjy tadidinao, izay fantatrao (nefa) tsy fantaray na henonay" ». Namaly ny hatak'i Petera i Maria ka nitantara ny resaka nifanaovany tamin'ny Mpamonjy ny amin'ny fahitany.
Hoy (i Maria): « Hitako tao amin'ny fahitana ny Tompo ka hoy aho taminy: "Tompo, hitako tamin'ny fahitana ianao androany." Namaly ahy izy ka nanao hoe: "Sambatra ianao izay tsy nisalasala tamin'ny fahitana ahy. Satria izay itoeran'ny eritreritra [ny fanahy] dia ao koa no misy ny harena." Hoy aho taminy: "Koa ankehitriny, Tompo, ny olona izay mahita fahitana ve mahita izany <amin'ny alalan'ny> fanahy [aina] <sa> amin'ny alalan'ny fanahy? »
Tamin'izany resadresaka izany dia nampianatra ny mpamonjy fa ny "izaho anaty" dia fitambaran'ny fanahy [aina]  sy ny fanahy/eritreritra ary eritreritra fahatelo izay eo anelanelan'ireo roa ireo izay mahita ny fahitana.
Avy eo dia tapaka ny lahatsoratra ary ny takila efatra manaraka tsy eo. Amin'ny tohin'ny fitantarana dia tsy nahatadidy intsony ny resaka nifanaovany tamin'ny mpamonjy i Maria. Fa ny nataony dia nitantara ny fanambaràna azony tao amin'ny fahitany. Maneho ny fiakaran'ny fanahy izay mifampiresaka amin'ny hery efatra [anjely] manao izay hisakanana azy, amin'ny fotoana hahazoany ny fialan-tsasatra farany, ilay fanambaràna.
Tsy ny rehetra no nankasitraka izany fahitana izany:
Namaly ireo rahalahy anefa i Andrea ka nanao hoe: "Lazao izay eritreritrareo amin'izay zavatra nolazainy. Satria tsy mino aho fa niteny izany taminy ny Mpamonjy. Satria azo antoka fa momba hevitra hafa izany fampianarana izany." (Maria 9:2)
Nanohitra azy [an'i Maria] koa i Petera ny amin'ireo zavatra ireo sady nanontany azy ny amin'ny Mpamonjy. "Niteny mangingina tamim-behivavy ve izy avy eo, fa tsy tamintsika, ary tsy ampahibemaso? Tokony hiverina ve isika ka hiara-hihaino azy [an'i Maria]? Izy ve no tiany noho isika?" (Maria 9:4)
Niaro an'i Maria Magdalena anefa i Levy ka nanameloka ny fanoheran'i Petera azy. Ao amin'ny lahatsoratra dia niseho ho tafintohina i Petera raha nahita fa nisafidy an'i Maria noho ny mpianany hafa i Jesosy mba hanazava ny fampianarany.
The Gospel According to Mary Magdalene (The Gospel of Mary) - The Gnostic Society Library
The Gospel of Mary - Sol Design
↑ Nadika avy tamin'ny pejin'ny Wikipedia amin'ny teny anglisy hoe "Gospel of Mary" notsidihina tamin'ny 18/11/2018.
↑ Jereo: The Gospel of Philip - The Nag Hammadi Library
↑ 3,0 et 3,1 Ny teny anglisy hoe soul no nadika sahala amin'io satria tsy manana teny teolojika na ara-pivavahana na ara-pilozofia roa samy faha afaka andikana amin'ny fomba raikitra ny hoe soul sy ny hoe spirit ny fiteny malagasy izay mandika azy ireo hoe fanahy. Amin'ny teny frantsay dia âme sy esprit no andikana azy ireo.
↑ Jereo: The Gospel of Mary
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Filazantsaran%27i_Maria&oldid=970882"
Dernière modification le 21 Mey 2019, à 06:12
Voaova farany tamin'ny 21 Mey 2019 amin'ny 06:12 ity pejy ity.